ह’स्त मै’थुन गर्नुका सात फा’इदाहरु यस्ता छन् – थाह-पाईराखौं ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/ह’स्त मै’थुन गर्नुका सात फा’इदाहरु यस्ता छन् – थाह-पाईराखौं !
काठमाडौं – ह’स्तमै’थुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अ’श्लील उ’त्तेजित व्यवहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठा’न्छन् । तर विज्ञानले भने ह’स्तमै’थुन लाई ग’लत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो र सामान्य मान्छ । ह’स्तमै’थुनको दौ’रानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सु’न्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त्यसकै बारेमा सोच्न थाल्छ । ह’स्तमै’थुन कुनै पनि कोणबाट ग’लत नभएको अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
७. प्र’जनन् रो’ग घटाउँछ: ह’स्तमै’थुनले प्र’जनन्सम्बन्धी रो’ग लाग्ने सम्भावना कम गराउँछ । दिनहुँ ह’स्तमै’थुन गर्ने पुरुषमा प्रो’स्ट्रेट क्या’न्सर लाग्ने सम्भावना कम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै, ह’स्तमै’थुनको आ’नन्द लु’ट्ने महिलामा पा’ठेघरस’म्बन्धी इ’न्फेक्सन अथवा मू’त्रनलीमा इ’न्फेक्सन हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । । एजेन्सी *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******